Ningbo Sine Magnetic Co., Ltd, ari nyanzvi kambani yaita Neodymium magnets a (NdFeB), Alnico magnets a, Samarium cobalt magnets A (SmCo), ferrite magnets A (Ceramic magnets a) uye simba renyika rinonzi magnetic gungano muna Ningbo, China. We achakupaiwo vomuzana kirasi zvechigarire rinobva zvigadzirwa.
Tine pfungwa ouduku uye ukasarasa mweya, itai zvose nokungwarira uye zvokutamba. Tinoisa zvose nokuedza kupinda remagineti pamwe kwemakore akawanda 'ruzivo uye ruzivo. We yakatanga kutsanya uye zvishoma nezvishoma mumakore 10 apfuura uye acharamba ichifamba.
Quality Mweya chigadzirwa uye noupenyu vachida. Tinogara kudzidzisa tsvimbo yedu kuti zvakanaka ishe unyanzvi hwavo. Hatina kukurairisai kuita Quality Management System: ISO9001: 2008, ISO / TS16949: 2009, uye ISO14001: 2004.Advanced kugadzirwa uye vachindiedza midziyo nechokwadi zvinhu yedu yakakwirira kusachinja-chinja uye yakakwirira pakusimba. Most edu yemhando midziyo anobva kuGermany uye Japan, akadai: ICP, une kamuri, Laser PARTICIPLE Analyzer etc. magnets a edu aenderane zvinodiwa CE, RoHS, SGS uye Reach murayiro.
magnets a edu Anonyanyowanika tsika akaita maererano zvinodiwa, zvinodiwa uye pokushandisa vatengi. A siyana magnets a zvinogona customized akasiyana zvinhu, giredhi, unhani, chimiro, divi, magnetization mirayiridzo, uwandu, etc. Tinogona kupa magnets a siyana producible maumbirwo akaita Disc, mhete, rectangle, kuutio, nemizariro, humburumbira, Tile, chidimbu , lamination, bhora uye vamwe nemamwe zvitarisiko. Uyezve, isu kare zvinobudirira gobvu zvakabudisa zvechigarire magnets A pamusoro soro mabasa mamakisi N54,52M, 50H, 48SH, 45UH, 42EH uye 38AH.
Tava kukwanisa inobereka zvibereko kunyange tiri kukura rwakazara kumusika dzakawanda. We makasimbisa zvakanaka bhizimisi ukama yose vatengi. Tinotenda kuti tichava zvaunogona mabhizimisi naye munguva yemberi iri pedyo. Taigona akupe hwakanakisisa zvigadzirwa pamwe yakachipa pashiri mutengo uye zvakanakisisa basa. Mira sezvinoita chirefu Rafa kumabvazuva, achibhururuka akasununguka yakakura denga. Sine achaita mberi kuramba kuti zvakanaka mudiwa wako ayo tsoka internationalization nzira.
Tinogamuchira iwe kutaura nesu kana une mibvunzo panyaya kambani yedu uye zvigadzirwa. Tinoedza vazivise, dzidzisa uye kupa yakanakisisa zvinhu uye mabasa iripo.
Kutarisira nokuvumba bhizimisi ukama anokudzwa wako kambani.